Reno4 Pro Overview | OPPO မြန်မာ
Super-modern 3D မျဉ်းကွေးဒီဇိုင်းက အခြားသော မျဉ်းကွေးများထက် ခေတ်ရှေ့ပြေးသည့်အသွင်ကို ဖော်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ ပြေပြစ်၊ တောက်ပြောင်ပြီး အနုပညာမြောက်စွာ ပုံစံချထားသဖြင့် အခြားသော ဘောင်အကွပ်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံရိပ်ပြသသည့်နှုန်း refresh rate 90Hz ရှိသည့်အတွက် မြင်ကွင်းတ်ိုင်း အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဖုန်းအသုံးပြုကြည့်ရှုရာတွင်လည်း ညက်ညောမှုရှိပြီး လှုပ်ရှားမှုရှိသောပုံရိပ်တိုင်းကို ပိုမိုအသက်ဝင်စေပါသည်။
ကာကွယ်မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်သော TÜV Rheinland ထောက်ခံချက်
သင့်မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်စောက်ရှောက်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ Reno4 Pro မှာ ကာကွယ်မှုအပြည့်အဝ ပေးနိုင်သော TÜV Rheinland ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Netflix နှင့် Amazon Prime ဗီဒီယိုများ
Reno4 Pro တွင် ဇာတ်ကားကောင်းများကို ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Netflix HD Streaming ထောက်ခံချက်နှင့် Amazon Prime Video HDR Streaming ထောက်ခံချက်တို့ကို ရယူထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို အရည်အသွေးမြင့်မြင့်ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြှုပ်ထားသည့် လက်ဗွေဖြင့်လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း 4.0
0.34s အတွင်း သင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်
နောက်ဆုံးပေါ်လက်ဗွေဖတ်သည့် နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သင့်ဖုန်းကို အလျှင်အမြန် လော့ခ်ဖွင့်ပေးနိုင်အောင် စီမံထားရှိပါသည်။ သိပ်သိပ်သည်းသည်းနှင့် စကန်ဖတ်နိုင်ပြီး အလျှင်အမြန် ခွဲခြားစိတ်ဖြာပေးနိုင်သောကြောင့် အလွန်မြန်ဆန်သော ဖုန်းလော့ခ်ဖွင့်ပေးနိုင်သည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
7.7mm နှင့် 161g*5 သာ ရှိသည့်အတွက် Reno4 Pro ဘေးမှကြည့်ပါက သတိမထားမိနိုင်အောင် ပါးလွှာပြီး သင့်အိတ်ကပ်နှင့် လက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင် နေရာယူမှုမရှိပါ။ သင်စိတ်ကူးထားသည့်ထက် ပါးလွှာသော၊ ပေါ့ပါးသော အထိအတွေ့ကို ခံစားကြည့်ပါ။
အဖြူရောင် ပိုးသားအလား နူးညံ့ချောမွေ့၊ တောက်ပြောင်လှပခြင်း။
မြူခိုးများဝေနေသော ခမ်းနားလှပသည့် ညချမ်းအလှ။
အမှိန်ဒီဇိုင်းကအမြင်တွင် လှပခန့်ညားရုံမျှမက စွဲမက်ဖွယ်အထိတွေ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လက်ဗွေရာထင်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ပြောင်လက်မှုမရှိသည့် ဒီဇိုင်းက စတိုင်ကျရုံမျှမက စွန်းထင်းခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းအားသွင်း မြန်ဆန်ခြင်း၊ ဘက်ထရီ ကြာရှည်ခံခြင်း
မြန်ဆန်ခြင်း၊ စမတ်ကျခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိခြင်း တို့ကြောင့် အချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပဲ လုပ်ငန်းအားလုံးအလွယ်တကူ ပြီးမြောက်စေပါသည်။ အားသွင်းချိန် ၅ မိနစ်တည်းဖြင့် YouTube ကို ၄ နာရီကြာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လက်ကျန်ဘက်ထရီပမာဏအနည်းငယ်နှင့်ပင် အသုံးပြုနိုင်သမျှ ဆက်လက်သုံးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ ၅% သော ဘက်ထရီပမာဏသာ ရှိစေကာမှု သင့်အနေဖြင့် WhatsApp ဖြင့် စာစီစာရိုက်စကားပြောဆိုခြင်းကို ၁.၅ နာရီကြာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။6.
သင့်အနေဖြင့် နောက်ကျမှအိပ်ယာထလျှင်ဖြစ်စေ၊ အိပ်ယာစောစောထလျှင်ဖြစ်စေ သင့်ဘက်ထရီ ကုန်ခမ်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် အိပ်ယာထက်တွင် အချိန်မည်မျှ အနားယူစေကာမူ ထိုကာလအတွင်း သင့်ဘက်ထရီအား ၂%*7 သာကုန်ခန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Snapdragon 720G processor သည် ဖုန်းလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးဖြစ်သော ဉာဏ်ရည်တုကို ယူဆောင်လာပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမားသော ဂိမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို တပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများအတွက် မြန်ဆန်အဆင်ပြေသော လုပ်ဆောင်ချက် အတွေ့အကြုံသစ်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 8GB RAM နဲ့ 256GB ROM က ကြီးမားမြန်ဆန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါမည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အဆင့်မြင့်အအေးပေးသည့် နည်းပညာက သင့်ဖုန်း၏ အပူချိန်နှင့်ပါတ်သက်၍ စိတ်ပူစရာမလိုအောင် အမြဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ဂရပ်ဖိုက်အပူလျော့စေသည့်စနစ်နှင့် ဖုန်းအပူချိန်ကို ဘေးအန္တာရယ်ကင်းကင်းနှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို အသုံးပြုထားပါသည်။
ပုံရိပ်များကိုဖမ်းယူနိုင်သည့် နှုန်း frame rate မြင့်မားသောကြောင့် အနှေးရိုက်ကွက်အတွင်းတွင် သင့်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တစ်ခုလုံး အသေးစိတ်ပုံဖော်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ပုံရိပ်ရှိ တောက်ပသော အရောင်များကို ချန်လှပ်ကာ ကျန်နောက်ခံအရောင်များကို အဖြူအမဲ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ဆန်းသစ်သော ရိုက်ချက်ပုံစံကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
သိသာထင်ရှားသည့် အရောင်များဖြစ်သော အနီ၊ အပြာနှင့် အစိမ်းရောင်များကိုသာ ရွေးချယ်ကြည့်ရှုလိုပါသလား။ AI algorithm က သင်ရွေးချယ်လိုသော အရောင်တစ်ရောင်ကိုသာ ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ရိုက်ကူးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လိုစွန့်စားခန်းမျိုးကိုမဆို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ရိုက်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တမူထူးခြားတည်ငြိမ်မှုရှိသော ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို ဆယ်ဖီကင်မရာနှင့်ပါ ရိုက်ကူးနိုင်ပါပြီ။
သင့်ဗီဒီယိုများကို စိတ်တိုင်းကျတည်းဖြတ်နိုင်ရုံမျှမက အသုံးပြုရအထူးလွယ်ကူမှုရှိပါသည်။
ပညာရှင်တစ်ဦးမှ အလှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပေးသကဲ့သို့ ညမီးရောင်များအား ဝါးပေးခြင်းအားဖြင့် အလှဆုံးဓါတ်ပုံများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
ဆယ်ဖီဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် အလင်းရောင်က အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ သင့်ညအချိန်တွင် ရိုက်ကူးသော ဆယ်ဖီဓါတ်ပုံများအားလုံးကို နေ့ဘက်တွင်ရိုက်ကူးသကဲ့သို့ လှပနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမှာင်ထဲတွင် ရိုက်ကူးနိုင်သော Ultra Dark Mode သည် မှောင်မဲသော ပါတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် လူ၏ပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူပုံဖော်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
108MP ဓါတ်ပုံများ၊ အရာရာတိုင်းကို အသေးစိပ်ကျလှပကြည်လင်စေရမည်။
အနုပညာရှင်များ၏ Wallpaper ပရောဂျက်
အနုပညာရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာ၏ လက်ရာဖြစ်သော Wallpaper များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး သင့်ဖုန်းကို အနုပညာမြောက်စွာ အသက်သွင်းလိုက်ပါ။
ထပ်မံထွက်ပေါ်လာသော ကမ္ဘာ့ဆွဲအားပုံစံ wallpaper ဒီဇိုင်းအား ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆွဲအား အားလုံးမှ လွန်မြောက်သော လှပမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုရ အဆင်ပြေအောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားခြင်း
ဖုန်းပေါ်တွင် လွင့်မျောနေသော သေးငယ်သည့် အရာလေးတစ်ခုမှ သင်အသုံးပြုလက်စ app များကို အမြန်အဆန်ဝင်ရောက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါပြီ။ အချိန်တိုင်းအတွက် အဆင်သင့်၊ အမြန်ဆန်ဆုံး ပြီးမြောက်အောင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်မှုကို သင်မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
မျက်နှာပြင်ကျယ်သော ဖုန်းကြီးတစ်လုံးကို လက်တစ်ဖက်နှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သင်အသုံးပြုမည့် icon များကို သင့်လက်မနှင့်နီးသည့်ထောင့်နားတွင်ချုံ့၍ ထားရှိပေးထားသဖြင့် သင့်အနေဖြင့် အသုံးပြု လိုသော app များကို အလွယ်တကူဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းအသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာအချင်းချင်း ဖိုင်များကို မျှဝေရာတွင် လွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင် OPPO Share ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
OPPO အမှတ်တံဆိပ်၏ အထူးပျော်ရွှင်စရာအဆင်ဖြစ်သော “ကံကြမ္မာစက်ဝန်း” နှင့် “Lab Ringtone” များကို သင့်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒိန်းမတ်အသံပညာရှင်၏ အော်ဒီယိုအသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆာင်ရွက်မှုမှတဆင့် library အတွင်းမှ အော်ဒီယိုများက သင့်မောပန်းမှုများ ပြေပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံသစ်များ ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ ချော့သိပ်သည့် တေးသွားသံစဉ်များ၊ သဘာဝသံစဉ်များနှင့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သောသံစဉ်များ။
*1. ပုံသေ default ထားခြင်းဖြင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ screen refresh နှုန်းကို ပြောင်းလဲပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် Setting အတွင်းတွင် Auto Select, 90Hz သို့မဟုတ် 60Hz တို့ကိုရွေးုချယ်နိုင်ပါသည်။
*2. OPPO ၏ တိုင်းတာစမ်းသပ်ချက်များအရ Reno4 Pro ကို ၃၆ မိနစ် အတွင်း ၁၀၀% ရအောင် အားသွင်းနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းနိုင်သော အချိန်သည် စက်ပစ္စည်းတခုချင်းစီ သို့မဟုတ် မတူညီသော အခြေခံအကြောင်းတရားများ - ပါတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ အသုံးပြုပြီးနောက် ဘက်ထရီစွမ်းရည် စသည်တို့အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
*3. ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကို ထောင့်ဖြတ်အနေအထားဖြင့် စင်တီမီတာသုံး တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ Reno4 Pro ၏ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံအပြည့်အနေအထားဖြင့် ၆.၅ လက်မ (၁၆.၆ စင်တီမီတာခန့်) ရှိပြီး မျက် နှာပြင်နှင့် ဖုန်းကိုယ်ထည်၏ အချိုးသည် 92.1% (အသုံးပြုသည့် ဧရိယာ) ရှိပါသည်။။ အမှန်တကယ် တွေ့မြင်နိုင်သောဧရိယာသည် ထောင်စွန်းအဝိုင်းများနှင့် ကင်မရာအပေါက် နေရာများကိုချန်လှပ်ပါက ထို့ထက်အနည်းငယ် လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
*4. လက်ဖြင့်ထိတွေ့စေခိုင်းခြင်းကို အာရုံခံနိုင်သည့်နှုန်း Touch Sampling Rate သည် PUBG Mobile, Mobile Legends နှင့် AOV (အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မရရှိနိုင်ပါ) စသည့်ဂိမ်းများကစားရာတွင် 180Hz ရှိပြီး အခြားဂိမ်းများကစားရာတွင် 120Hz ရှိပါသည်။
*5. ပါဝင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တိုင်းတာမှုအပေါ်မူတည်၍ စက်၏အထူသည် ±0.2mm ကွာဟနိုင်ပြီး စက်၏အလေးချိန်သည် ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ချနှင့် ယှဉ်ပါက ±3g ကွာဟမှုရှိနိုင်သည်။
*6. ပြသဖော်ပြပေးသော ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းသည် စက်ပစ္စည်းအလိုက် ကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းတွင်ဖော်ပြသော "ဘက်ထရီပမာဏ ၅%" ဆိုသည်မှာ 4000mAh ဘက်ထရီ၏ ၅% နှင့် ညီမျှသည် ။ ဥပမာ - 200mAh။
*7. ၂% သာ ပါဝါအသုံးပြုခြင်းကို ည ၈ နာရီ အတွက်သာ ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
*8. Reno4 Pro ၏ အနှေးဗီဒီယိုရိုက်ချက်တွင် 240fps ကိုအသုံးပြုထားပြီး ဖုန်းမျက် နှာပြင်ပေါ်သို့ပုံရိပ်ထင်သည့်ကြိမ်နှုန်းတွက်ချက်မှု Frame insertion algorithm သည် 960fps အထိရှိသည်။
*9. OPPO Reno4 Pro တွင် ပါဝင်သော Quick Return Bubble လုပ်ဆောင်ချက်ကို PUBG, AOV(အိန္ဒိယတွင်မရရှိနိုင်ပါ) နှင့် Mobile Legends ကစားရာတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော ဒေသများ - အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း။
*10. OPPO Lab တွင် OS update လုပ်ခြင်းကို သြဂုတ်လမတိုင်ခင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
* OPPO ၏ စမ်းသပ်ချက်များအရ လက်ဗွေစနစ်သုံး ဖုန်းလော့ခ်ဖြည်ခြင်းကို စမ်းသပ်ချက်များတွင် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
* Reno4 Pro တွင် စီးရီး ၂ ခုအား ဆက်သွယ်ပေးသည့် ဆဲလ်များကို အသုံးပြုထားပြီး တစ်ခုစီလျှင် ဆန့်နိုင်သောပမာဏသည် 2000mAh ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်၂ ခုပေါင်းပါက ဖုန်းတစ်ခုလုံး၏ ပါဝါသိမ်းဆည်းနိုင်သော ပမာဏမှာ 4000mAh ဖြစ်သည်။
* ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူ အပြောင်းအလဲရှိပါက အနညး်ငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှန် တကယ် ထွက်ရှိလာချိန်မှသာ ကိုးကားမှုပြုပါရန်။
* ယခု ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက် အသေးစိပ်အချက်အလက်များသည် OPPO ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ တာတိုင်းရေးအချက်အလက်များ၊ စမ်းသပ်ခန်းနှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့သူများထံမှ ပေးပို့လာသော အချက်အလက်များမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိပ်အချက်အလက်များသည် စမ်းသပ်အသုံးပြုသည့် ဆော့ဝဲလ် ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ဗားရှင်းများကို အခြေခံကာ အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။